सिसियुका बिरामीजस्ता आइसियु
22 May 2013 | 09:43am
काठमाडौं - गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचार हुने सघन उपचार कक्ष (आइसियु) नेपालमा आफैं दीर्घरोगी छ। त्यहाँ न उपकरण छन्, न विशेषज्ञ। देशभरिका अस्पतालमा रहेका ५ सय शैयाका खटिने विशेषज्ञ डाक्टर जम्मा पाँचजना छन्। नेपालका अधिकांश अस्पतालका आइसियुमा उपचार प्रभावकारी भए–नभएको क्षणक्षणमा जाँच्ने अत्यावश्यक एबिजी मेसिनसमेत छैन।
'क' श्रेणीका आइसियुका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणलाई आधार मान्दा कुनै पनि अस्पतालका एउटै आइसियु मापदण्डअनुरुप छैनन्। 'वीर र शिक्षण अस्पतालका आइसियुमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका उपकरण छैनन्,' वीर अस्पतालका आइसियु विशेषज्ञ (इन्टेन्सिभिस्ट) डा. रविमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'सबैभन्दा भयावह अवस्था त जनशक्तिमा छ।'
विज्ञहरुका अनुसार आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीलाई विभिन्न परीक्षणका लागि धेरै टाढासम्म लैजान नमिल्ने र अधिकांश परीक्षण तत्काल चाहिने भएकाले सबै सेवा त्यहीँ उपलब्ध हुनुपर्छ। नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (एएससिसिएम) का अध्यक्ष डा. मोदनाथ मरहठ्ठाका अनुसार २४ सै घन्टा इन्टेन्सिभिस्ट नभए पनि आइसियु कम्तीमा तालिमप्राप्त एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनैपर्छ।
निजी अस्पतालका धेरै आइसियु नर्सको भरमा चलेका छन्। बिरामीको कुनै अंगले काम गर्न छाडेको अवस्थामा आइसियुमा राखिन्छ। विज्ञका अनुसार उचित इन्टेन्सिभ केयर पाए गम्भीर बिरामी पनि बाँच्ने सम्भावना अधिक रहन्छ
देशभरका ८० जति आइसियुमा ५ सयभन्दा बढी शऒ्ढया रहेको आँकडा छ। तर खास यही विषयका विशेषज्ञको संख्या भने जम्मा पाँचमात्र छ। सामान्यतः २४ घन्टा इन्टेन्सिभिस्टको मातहत सेवा दिनुपर्ने, सम्भव नभए एनेस्थेसियोलोजिस्ट अनिवार्य हुनुपर्ने आइसियुको न्यूनतम मापदण्ड नै मानिन्छ। कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराउने उपकरण (भेन्टिलेटर) को सबैभन्दा बढी ज्ञान एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई हुने भएकाले इन्टेन्सिभिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्टका साथ अन्य विशेषज्ञ भएको आइसियु सेवामात्र जनशक्तिका हिसाबले अब्बल मानिन्छ।
'विभिन्न अनुभव सँगालेका एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई समेत गणना गर्दा पनि आइसियुलाई जनशक्ति पुग्दैन,' डा. मरहठ्ठाले भने। यस्तो विशेष सेवाका लागि पोस्ट ग्र्याजुएसनपछि आवश्यक कम्तीमा एकवर्षे तालिमको व्यवस्था नेपालमा छैन। नेपालका पाँच इन्टेन्सिभिस्टमध्ये चारजना डा. श्रेष्ठ, डा. प्रदीप वैद्य, डा. सुजिता मानन्धर र डा. बिन्दुलक्ष्मी शाही वीरमा कार्यरत छन्। डा. सुभाष आचार्य त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन्।
नेपालमा १ सय ४० एनेस्थेसियोलोजिस्ट काउन्सिलमा दर्ता रहे पनि आधाभन्दा बढी विदेश छन्। बाँकी अधिकांश सरकारी, त्यसमा पनि राजधानीकै अस्पतालमा छन्। दुई वर्ष राजधानीको आइसियु सेवाबारे विस्तृत अध्ययन गरेका डा. श्रेष्ठका अनुसार झन्डै अढाइ दर्जन बढी अस्पतालका आइसियु कक्षमा रेजिडेन्ट मेडिकल अफिसरसमेत भेटिँदैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार १५ शैया भन्दा माथिका आइसियु कक्षमा एकजना इन्टेन्सिभिस्ट अनिवार्य हुनुपर्छ। तर अधिकांश मेडिकल कलेजमा यसभन्दा बढी शैया भए पनि त्यहाँ इन्टेन्सिभिस्ट छैनन्। 'आइसियुमा एक बिरामीका लागि एक दक्ष नर्स, चार बिरामीका लागि एक तालिमप्राप्त हाउस अफिसर र १५ बिरामीका लागि एक इन्टेन्सिभिस्ट हुनुपर्छ।
स्रोतका अनुसार ३६ शैयाको आइसियु भएको काठमाडौं सुन्धाराको लाइफकेयर अस्पतालमा इन्टेन्सिभिस्ट त के, एनेस्थोसियोलोजिस्ट पनि नाममात्रै भेटिन्छ, मान्छे हुँदैनन्। महँगो शुल्क लिए पनि धेरै अस्पतालले आइसियुका बिरामीलाई नर्सिङ स्टाफको निगरानीमा भर्ना लिने गरेका छन्। धेरै अस्पतालले आवश्यक पर्दा जनरल फिजिसियानलाई बोलाएर परामर्श लिने गरेका छन्।
धेरै निजी अस्पतालका आइसियुमा सामान्य रगत परीक्षण गर्ने मेसिन (बल्ड ग्यास एनालाइजर) समेत छैन। 'यतिको भए चल्छ भनेजस्ता आइसियु पनि एकतिहाइमात्र होलान्,' डा. मरहठ्ठाले भने, 'सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा बचाउन गरिने अन्तिम प्रयासमा पनि यस्तो लापरबाही छ।'
गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई २४ सै घन्टा विशेषज्ञको हेरचाह र प्राविधिक रुपमा शरीरको अंगहरुका काम र गतिलाई सूक्ष्म अनुगमनका आधारमा उपचार थाल्न आइसियुको सहारा लिइन्छ। विभिन्न तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८० आइसियुमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी शऒ्ढया छुट्ट्याइएका छन्।
आइसियुका लागि अत्यावश्यकीय उपकरण मोनिटर, मेकानिकल भेन्टिलेटर, एबिजी ग्यास एनलाइजर, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासेनोग्राफी, हेमोडायलसिस मेसिन, सेन्ट्रल अक्सिजन सिस्टम, पोर्टेबल एक्सरे, डिफिविलेटर, एबिजी (ग्यास एनालाइजर), इलेक्ट्रिकल बेड, छुट्टै ल्याबजस्ता सुविधा चाहिन्छ। 'बोर्ड झुन्ड्याउँदैमा कसरी आइसियु भन्ने?' श्रेष्ठले भने, 'राजधानीमै भेन्टिलेटर र एबिजी नभएका थुपै आइसियु छन्, एबिजी नै नहुनु अनुमानमा उपचार हुनु हो।'
एबिजी मेसिनले परीक्षण रिपोर्ट तीन/चार सेकेन्डमै दिन्छ। यो उपकरणले रगतमा अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड र एसिडको मात्रा जाँच गर्छ, भेन्टिलेटरले फोक्सोलाई काम गर्न सहयोग गरे–नगरेको देखाउँछ। 'वीरमा पनि छुट्टै डाइलसिस, छुट्टै ल्याबजस्ता मेसिन छैन,' डा. श्रेष्ठले भने, 'भेन्टिलेटर पनि फोक्सोलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने खालको छ।
भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीको मिर्गौलाले काम गर्न छाडे तत्काल डाइलसिस गर्नुपर्छ, तर आइसियुमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा वीरमा समेत यस्ता बिरामी जोखिममा पर्छन्। झन्डै दुई वर्षअघि श्रेष्ठले नेपालका आइसियुको अवस्था अध्ययन गर्दा ७० प्रतिशत आइसियु राम्रा अस्पतालका जनरल बेडजस्ता भेटिएको जनाए।
दीपक दाहालLatest from
पूर्व मुमा बडामहारानी अस्पताल भर्ना
गिरिजाप्रसादको 'सम्मान'मै गोलमाल
विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म
मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक पास गराउन फेरि चलखेल